Vidio ny reduction & Constipation Detox voajanahary Laso Slimming Tea - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Mampihena ny bloating & constipation Natural Detox Laso Slimming Tea
$5.99 Regular vidiny $10.99
Mampihena ny fivontosana sy ny fitohanana Natural Detox Laso Slimming Tea - 7d tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Akora: ravina Lotus, Melon amin'ny ririnina, voa Cassia, Hawthorn, Raozy mena roa, ravina Dandelion, ravina Nettle, ahitra voasarimakirana, dite maitso.
Ity vokatra ity dia manampy ny vatana amin'ny alàlan'ny famoahana ny metabolisma- hampiroborobo ny fandevonan-kanina mety, ary ny fanampiana amin'ny fanatsarana ny làlam-pandevonan-kanina.
Ireo akora vokatra ireo dia natao hanentanana ny fahafahan'ny vatana hikarakara tavy be loatra, handrisika ny fivezivezena ao amin'ny rà, ary hanomezana anti-otrikaina, vitamina ary mineraly tena ilaina.
Fanadio detox sy booster metabolisma- Ny detox 14 andro dia manampy ny vatanao amin'ny fanadiovana sy fanadiovana ny tenany amin'ny poizina sy ny fako; mampitombo ny fatran'ny metabolisma sy ny angovo anananao, manampy amin'ny fanalana ny rano be loatra, ary mampihena ny adin-tsaina raha mbola manandrana tsara ianao.
Fomba iray tsara kokoa hanadiovana- Ny fifangaroana ataontsika dia tsy misy ny lazan'i Senna Leaf.
Ity vokatra ity dia detox malefaka izay manohana ireo bakteria tsara ao anaty tsinay; fanampiana ny vatana amin'ny fahazoana dingana metabolika mandeha tsara.
Rehefa mahazo ity vokatra ity ianao dia tsy maintsy manamarina ny daty famokarana. Ny vokatra dia manana fiainana talantalana 2 taona.
Miorina amin'ny fanavaozana 24
Fotoana fahatongavana tena tsara alohan'ny daty. Faly be
Fanaterana haingana, fonosana tsara, mifanaraka amin'ny famaritana. Ho ahy hanao ny ambiny sy hizaha toetra;)
Tena tsara ity dite ity izay manala ny tavy amin'ny vatana rehetra